कसरी आइपुगे अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा रहेको टेक्सास डेलरिओ पुलमुनि हजारौं हैटियन? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
कसरी आइपुगे अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा रहेको टेक्सास डेलरिओ पुलमुनि हजारौं हैटियन?
गैरकानूनी रुपमा अमेरिका छिर्ने क्रममा अमेरिका दक्षिणी टेक्सासको सिमाक्षेत्रमा रहेको पुलमुनि हजारौं हैटियनहरु सुतिरहेका छन् । अमेरिकन सिमा सुरक्षा अधिकारीहरुले हैटियन आप्रवासीहरुलाई घोंडामा चढेर लखेटेका तस्वीरहरुले राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यान खिचेको छ ।
अमेरिका छिर्नका लागि सिमाक्षेत्रमा आएका हैटियनको संख्या झण्डै १० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । उनीहरुमध्ये अधिकांश भूकम्प लगायतका संकटका कारण हैटी छाडेर दक्षिण अफ्रिकामा गएका र त्यहाँबाट अहिले अमेरिका छिर्न चाहेकाहरु हुन् । अमेरिकामा बढी कमाई हुने आशा र ब्राजिल लगायतमा मुलुकमा महामारीको खराब अवस्थाका कारण हैटियनहरु अमेरिकातिर हान्निएका हुन् ।
तस्वीर: गेटी इमेज